यीनै हुन् कालोबजारीका ठूला माछा जालमा पार्ने प्रहरी कमाण्डर। – Namaste Dainik
April 10, 2020 NamastedainikLeaveaComment on यीनै हुन् कालोबजारीका ठूला माछा जालमा पार्ने प्रहरी कमाण्डर।
काठमाडौं। देश कोरोना भाइरस(कोभिड १९) सँग जुधिरहेको बेलामा मेडिकल सामग्रीको कालोबजारी भइरहेको सूचना पाएपछि अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुलबहादुर थापा गम्भीर भए । शंकर ग्रुपका संचालक सुलभ अग्रवालले कोरोना भए नभएको ज्वरो नाप्ने थर्मोगन १६ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको सूचना थापाले कुनै माध्यमबाट आइतबार पाएका थिए । ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने थर्मोगनको १६ हजार र ३ सयमा पाइने एन नाइन फाइभ मास्कको ९ सयसम्ममा बिक्री गरिरहेको सूचना उनले पाए ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका एक पदाधिकारीले थर्मोगन खोजी गर्दै जाने क्रममा त्रिपुरेश्वका सर्जिकलहरु चाहारे । उनलाई कसैले त्रिपुरेश्वरको कृष्ण इन्टरप्राइजेजमा पाइन्छ भनेपछि उनी त्यस सर्जिकलमा पुगे । उक्त इन्टरप्राइजेजका संचालक सपना अग्रवाल र संजय अग्रवालले २२ हजारमा थर्मोगन उपलब्ध गराउनसक्ने बताए । ३ हजार ५ सयमा पाइने थर्मोगनलाई २२ हजार कसरी तिर्ने ? उनले यसो भन्दा अग्रवालले भनेका थिए रे। हामीले जगदम्बाबाट १६ हजारमा ल्याएको,त्यत्रो लगानी गरेपछि ६ हजार त मुनाफा खानुपर्यो नि ? उनी पुनः विशाल सर्जिकलमा गए । बिशाल सर्जिकल कन्सर्नमा पनि पाइन्छ भनेर भनेका त्यहाँ गए । उक्त सर्जिकलका संचालक एबी भण्डारीले पनि २२ हजार तिर्ने भए उपलब्ध गराउन सक्ने बताए । उनी पुनः तिरुपति सर्जिकलमा गए,तिरुपतिले पनि कृष्ण र विशालकै जस्तो २२ हजार पर्ने कुरा सुनाए ।
महामारीमा यस्तो लुट गर्न लागेकाले उनले असह्य भएर कुनै माध्यमबाट अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी थापाकोमा सूचना पुर्याए । त्यसो त अनेरास्ववियुका नेता समिक बडाल पनि आफ्नो जिल्ला काभ्रेका स्वास्थ्य संस्थामा थर्मोगन माग भएपछि खोजीमा निस्किए । उनलाई पनि बिशाल सर्जिकलले २२ हजारमा उपलब्ध गराउने भन्यो । उनले थर्मोगनको कालोबजारीको जोरो पत्ता लगाउने क्रममा शंकर ग्रुपका संचालक नै सक्रिय रहेको भनेर आइतबार सामाजिक संजालमा नै लेखे।
स्वास्थ्य सामग्रीमा भइरहेको यो कालोबजारीको जरोसम्मै पुग्नुपर्ने निष्कर्षका साथ महाशाखा प्रमुख थापाले सक्रियता देखाए । उनले महाशाखाको टीमलाई शंकर ग्रुपका संचालक सुलभ अग्रवालको मोवाइल नम्बरमा ग्राहकको रुपमा थर्मोगन चाहिएको भनेर सम्पर्क गरी जालमा पार्न सकिने तरिका अपनाउन लगाए । टीमका एक सदस्यले ग्राहकको भेषमा आइतबार सुलभलाई सम्पर्क गरे । सुलभले आफूसँग १ सय पिसमात्र भएको र प्रतिपिस १६ हजार रुपैयाँमा दिन सकिने बताए । उनले थर्मोगनको कालोबजारी गर्दा आफूसँग १ सय पिस मात्र भएको भन्ने गरेका थिए । त्यही कुरा उनले ग्राहक बनेर फोन गरेका प्रहरीलाई पनि गरे । ग्राहक बनेका महाशाखाका प्रहरीले डेढ सय पीस चाहिएको बताए । उनी पहिला १ सय पिस मात्र छ भनिरहेका थिए । तर पछि १५ हजारका दरले १ सय ५० पीस नै दिन तयार भए ।
अग्रवालसँग थर्मोगनको डिल त गर्यो,तर लकडाउनका कारण महाशाखाले आवश्यक रकम जुटाउन सकेन । अपराध महाशाखाले यस्तै कामका लागि राखिएको सो मनी पनि बैंकखातामा थियो । पैसा जुटाउन नसकेपछि आइतबार सामान लिन जान सकेन । चेकमा कारोबार गर्न अग्रवाल तयार नहुने पैसा कहीँबाट नजुटेपछि सोमबार पनि प्रहरीले एक्सन लिन सकेन । र,मंगलबार जसरी पनि पैसा जुटाएर का’लाबजारीयालाई जालमा पार्न एसएसपी थापा लागे ।
मंगलबार १० लाख नगद र ५ लाख रुपैयाँको चेक लिएर प्रहरी अग्रवालले दिएको लोकसनमा गए । पैसा बोकेर सादा पोशाकका प्रहरी सामान रिसिभ गर्न तयार भएर बसेका थिए । अग्रवालले कूटनीतिक नियोगको गाडीमा आएर थर्मोगन लिने ग्राहकको खोजी गर्न थाले । पैसा बोकेका ग्राहकले आफू नै हो भनेपछि अग्रवालले सो गाडीबाट सामान निकाले । तर चेक नलिने बरु १० लाखको मात्र ६६ थान थर्मोगन दिने भनेर निकाल्न थाले । उनले ६६ थान थर्मोगन निकाल्दानिकाल्दै प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लियो र सामान पनि बरामद गर्यो । प्रहरीको फन्दामा परेपछि उनले आफू कूटनीतिक नियोगको मानिस भएकाले पक्राउ गर्न नसक्ने भन्दै ध्वाँस दिए । एकछिन त प्रहरी अधिकारी अलमलमा परे । तर एसएसपी थापाले कूटनीतिक नियोगको गाडीमा कालोबजारीका सामान बोक्न पाइँदैन,त्यस्तालाई त झन् कडा कारबाही गर्नुपर्छ,जो भए पनि नछोड्नू भनेपछि उनलाई भ्यानमा कोचेर लगिएको थियो । नियन्त्रणमा लिइसकेपछि सुलभले बलजफ्ती गरी फु’त्किन खोज्दा प्रहरी भ्यानको लुकिङ ग्लास नै ‘फृुटेको थियो।
खसीको मासु प्रतिकिलो १८ सयमा बेचेपछि आई कालु मिट सेन्टरलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना ।
साउदीको एउटै कोठामा ४ महिना देखि २२ नेपाली: ‘शौचालयको पानी खाएर बाँचेका छौं ।